प्रसिद्ध वेश्याको सनसनीपूर्ण आत्मकथा « News of Nepal
साधना – अंक ३ | वर्ष ११ | पूर्णाङ्क ११० | चैत २०५९
जब म ६ वर्षकी थिएँ, त्यतिखेर डेटन सहरमा एउटा चर्चित देलिशृङ्खला ‘आइ लभ लुसी’ प्रसारण भइरहेको थियो । यस धारावाहिकको प्रमुख पात्र लुसीको म प्रशंसक थिएँ । म ठूली भएपछि लुसीजस्तै निडर, आत्मनिर्भर र अरुभन्दा भिन्नै प्रकारको केटी बन्छु भन्ने समना पालेकी थिएँ ।
समय आफ्नै गतिमा हिँडिरहेको थियो । ओहायो राज्यको डेटन सहरमा हामीहरु हाँसीखुशी दिनहरु बिताउँदै थियौ । बगैँचासहितको हाम्रो घर भव्य थियो, तर रुपियाँ भने चाहिदो मात्रामा थिएन । हामीहरु स्तरीय जीवन बिताउने प्रयास गथ्र्यौ तर पर्याप्त पैसाको अभावले गर्दा हामीहरुको जीवन त्यति सन्तोषपूर्ण थिएन । बुबाको थोरै आम्दानीले गर्दा ठाँटबाँटसँग बस्न गाह्रै परिरहेको थियो । म बुबाकी एक्ली छोरी थिएँ । बुबाआमाले बढी पैसा कमाउने अनेकौं उपाय सोचे तर सफल हुन सकेनन् । यता मेरो कलेजको पढाइ पनि शुरु भइरहेको थियो । हामीहरुको सम्पत्ति भन्नु जे–जति थियो त्यो सानो जग्गा नै थियो । हाम्रो जीवन यसरी अप्ठ्यारोमा गुज्रिन थालेपछि एकदिन बुबाले सो जग्गा बेचिदिनुभयो र आएको पैसादराजभित्र राख्दै यो सबै पैसा तिम्रै हो भन्नुभएको थियो । उहाँले तिमी ठूली भएपछि तिम्रो नाममा बैंकमा जम्मा गरिदिनेछौं र तिमी २४ वर्ष पुगेपछि सबै पैसा तिम्रो हुनेछ भन्नुभएको थियो ।
‘मैले त सिर्फ अनुभव लिनको लागि मात्र…।’ यो वाक्य टुङ्ग्याउन नपाइै उनले बीचमै मेरो कुरा काटेर भनिन्– तिमी भोलि मेरो घरमा आऊ है डोलार्स। उनले मलाई निमन्त्रण दिइन, मैले पनि स्वीकृति जनाएँ।
भोलिपल्ट साँझ म एलिनको घरमा गएँ। उनले मलाई स्वागत गर्दै भनिन् म तिमीलाइ एउटा कुरा बताउन चाहन्छु।
त्यो कुरा के हो? – मैले उत्सुकतापूर्वक सोधें।
मैले साराको भवनमा काम गनैको लागाी स्वीर्कत पाएँ । साराले मलाई घर छोडेर गा्रहकहरु भेट्न जाँदा एउटा कागजमा कहाँ कोसँग भेट्न जाँदैछु भन्ने कुरा लेखेर छाड्न सिकाएकी थिइन् । म वेश्या भएर साराकहाँ काम गर्दा कतिपय महिलाहरुले यो पेसा छोडेर गएको पनि देखैं । कतिपएले यही पेसाबाट नै जीवन गुजार्ने निर्णय पनि लिए)का थिए । धेरूजसो मेरा वेश्या साथीहरुले यो पेसामा लाग्दा उत्पन्न भएको खतरा देखिसकेका थिए ।
उनीहरुले साथीहरु लुटिएका मारिएका र प्रहरीले पक्राउ गरेर लगी यातना दिएका पनि देखिसकेका थिए तर मैले यस्तो केही पनि भोग्नुपरेको थिएन् मलाई यो पेसाबाट उत्पन्न हुने खतरा नै रोमान्टिक लाग्न थालेको थियो । प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ गा्रहकसँग भेट्न जानु नै मेरो गुप्त मिसन थियो।
केही दिनपछि मैले एउटा छुट्टै वेश्याहरुको समूह बनाएर त्यसको नाम ‘हायर’ राखे । यस समूहको संस्थापक अध्यक्ष म नै थिए । यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य वेश्याहरुलाई एकत्रित पार्नु र उनीहरुमाथि भइरहेको अन्यायको विरुद्ध लड्नु थियो। केही समयपछि मैले हायर ग्रुपको लागि एक जना वकिललाई फोन गरे र कानुनी परामर्शको लागि समय चाहिएको बताएँ । त्यस बेला ती वकिल एउटा कानुन कलेजमा पढाउने गर्थे । उनको नाम माइकल हायाम्यान थियो । उनले मलाई उनको आफ्नै घरमा साँझको खाना खाने गरी निमन्त्रणा गरे ।
माइकल अति नै खाइलाग्दा र सुन्दर रहेछन् । कुराकानिका क्रममा मैले उनलाई मनमनै मन पराउन थालें । उनले मलाई उनकी श्रीमतिसँग राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा पनि बताए । यही समयमा उनीसँग शरीर सुम्पेर उनलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई आग्यो । जब हामीुँगै खाना खान थाल्यौं । त्यसपछि मैले आफ्नो प्रेमीसँग भेट्न छोडेको कुरा बताएँ । यो कुरा सुनी उनी निकै हाँस्न थाले । उनको हाँसोलाई चिर्दै मैले भने– ‘म मेरो शरीर तिमीप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु । ’
त्यसको केही दिनपछि माइकलले मलाई दोस्रो पछक डिनरको निम्ती आमन्त्रण गरे । त्यति बेला मैले यति रक्सी पिए कि जुन मात्रा पहिला कहिल्यै पिएकी थिइनँ । त्यतिखेर मलाई यौनको नशा पनि लागिरहेको थिायो । मैले उनलाई आफ्नो घरमा ल्याएर अँगालोमा कसिदिएँ। उनी पनि यसमा तयार भइहाले । माइकलले मसँग एक घण्टा जति आनन्द लिए । उनले मलाई त्यसअघि अनुभव नै नगरेको सन्तुष्टि दिए । म यौनतृष्णाबाट तृप्त भएर सुत्नै लागेकी थिएँ, त्यही बेला फोनको घण्टी बज्न थाल्यो ।
फोन एकजना ग्राहकले गरेको रहेछ । उसले मलाई तुरुन्तै आउन आग्रह ग¥यो । ऊ घण्टाको २ सय डलर दिन पनि राजी भयो । म यति राम्रो आम्दानी हुने मौका गुमाउन चाहन्नथें । यता माइकल पनि मस्तले निदाइसकेका थिए । मैले उनलाई घरमा एक्लै छोडि ढोकामा ताल्चा मारेर ग्राहकलाई भेट्न गएँ ।
यसै कारणले हामीलाई अर्को वकिलको आवश्यता प¥यो । हामीले खोज्दै जाँदा ब्रुस मोरिस नामको एक प्रसिद्ध बकिललाई भेट्टायौं । उनी एटलान्टा सहरभरिमै नामुद वकिलमा गनिन्थे । मेरा सबै कुरा उनलाई बताएपछि उनले मेरो सम्पूर्ण केस राम्रोसँग नबुझेसम्स अदालतमा हाजिर हुन नपर्ने बताए ।
तर मेरा भाग्य नै खोटो भएर होला, अदालतले मलाई हाजिर नभएको भनी बारेन्ट जारी ग¥यो । यसको सूचना पत्रकारहरुले थाहा पाएछन् । उनीहरुले पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमै ‘भगुवाइ डोलार्स फ्रेन्च’ भनेर छापिदिए ।
हामीजस्ता महिलाहरु यस्ता अपराधीहरुकहाँ बारम्बार पुगिरहनुपथ्र्यो । प्रायः धेरैजसो साधारण व्यक्तिहरुलाई वेश्यासँग जीवन निर्वाह गर्न अत्यन्त कठिन हुने गर्दछ । यो पेसा निकै घृणित कार्य भएकाले मानिसहरु सरकारदेखि डराउने गर्थे । यो पेसामा लाग्न अत्यन्तै दरो मुटु चाहिन्छ ।
जबदेखि म माइकलसँग वैवाहिक जीवन बिताउन थालें, त्यो बेलादेखि मैले यस्तो काम गर्न छाडिदिएँ । जब म यस्तो काम गर्दैनथे तब मेरो यो खाली दिमागमा शैतानले डेरा जमाउन पुग्थ्यो । त्यो बेला म धेरै अघिका साथीहरुलाई सम्झिन पुग्थें, जसको साथमा मैले वषौंसम्म काम गरेकी थिएँ । आप्mनो कारमा एक्लै एउटा अपरिचित ग्राहकसँग नौलो ठाउँमा घुम्न जानु कम रोमाञ्चक हुँदैन । संसारका कुनाकाप्चाबाट आएका व्यक्तिहरुसँग बसेर कुराकानी गर्नु र उनीहरुसँग यौनजीवन विताउनु निकै रोमाञ्चकारी र जीवनकै आनन्ददायी क्षण हुने गर्दछ । यस्तो रोमान्टिक क्षणको उपभोग यदि कसैले गर्न पाउँछ भने त्यो हामीजस्ता वेश्याहरुले मात्र हो ।
म एउटी वेश्या हुँ । आफूलाई वेश्या भन्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन । मैले जीवनको आधा भाग वेश्या भएर नै जिएकी छु भने आपूmलाई वेश्या भन्न के को लाज ?(यो आत्मकथा एउटी अमेरिकी प्रसिद्ध वेश्याको हो, जसको नाम डोलार्स फ्रेन्च हो । सन् १९९५ मा उनलाई एटलान्टा सहरका अपराधीहरुले चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिदिए । पेसेवर अपराधीहरुको शिकार भएकी डोलार्स फ्रेन्चका हत्याराहरु अझै पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।)